Isizinda se-Ultrasonic Astaxanthin Sokukhiqiza Okuphezulu - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-Astaxanthin iyi-antioxidant enamandla kakhulu esetshenziselwa imithi kanye nezithako zokudla okunomsoco.
Ukuze ukhiqize i-astaxanthin ephezulu emithonjeni yemvelo efana ne-algae, kuyadingeka inqubo ephakeme yokukhipha ukusebenza.
Isizinda se-ultrasonic yindlela yokwelashwa, okunikeza isivuno esikhulu se-astaxanthin ngesikhathi esifushane kakhulu sokukhipha.
Ultrasonics High-Performance ye-High-Quality Astaxanthin
Ukwenziwa kwe-ultrasonic we-Astaxanthin kusuka ku-Microalgae
I-Astaxanthin ye-supplementary dietary, eyadliwa ngabantu nezilwane ngenxa yezinzuzo zabo zezempilo, i-astaxanthin itholakala ezidlweni zasolwandle noma ikhishwe ku-algae H. pluvialis. I-Haematococcus pluvialis iyi-microalga eluhlaza, eveza okuqukethwe okuphezulu kwe-astaxanthin lapho kusetshenziswe izimo zokucindezeleka, isb. U-salinity ophezulu, ukuntuleka kwe-nitrogen, ukushisa okuphezulu nokukhanya. Njengoba kufike ku-9.2mg / g i-astaxanthin nge-algae cell (= kuze kufinyelele ku-3.8% ngesisindo esomile se-H. pluvialis), i-Haematococcus pluvialis iqoqa okuqukethwe okuphakeme kakhulu kwe-astaxanthin yemvelo ngakho-ke yingxenye ekhethiwe yokukhiqiza i-astaxanthin.
Ukuze ukhulule i-astaxanthin e-microalgae eluhlaza, amaseli algae kufanele aphazamiseke. I-Ultrasonication isungulwe kahle ngenhloso yokuphazanyiswa kwamangqamuzana, i-lysis nokuhlukaniswa kwamakhemikhali e-bioactive auch njenge-lipids, ama-antioxidants, ama-polyphenols nama-pigment yemvelo. Ama-ultrasonics asebenza kahle adala amandla asebenzayo angaphazamisa izindonga zezingcingo ngamandla wekhanda futhi abangela ukukhululwa kwezinto eziphilayo ezifana ne-astaxanthin.
Ukwenziwa kwe-Ultrasonic ka-Astaxanthin kusuka eYilweni
I-Phaffia rhodozyma imvubelo ecebile e-astaxanthin. Kodwa-ke, udonga olukhulu lwamaseli ka-P. rhodozyma, oluthile oluyinhloko ye-glucan futhi olubhekene nesimo se-cell rigidity, lwenza ukuphazanyiswa kwamangqamuzana nokuhlukaniswa kwe-astaxanthin kube umsebenzi obalulekile. Abacwaningi (uGogate et al. 2015) bathola ukuthi isizinda se ultrasonic kuhlanganiswa ne-lactic acid siqinisa ukuphazanyiswa kwamangqamuzana futhi kwenza ukukhishwa kwe-astaxanthin ku-P. rhodozyma ibe yinqubo enhle, enomngcele ohambisana nendawo. Babesebenzisa i-lactic acid njenge-medium for ukuphazanyiswa kanye ne-ethanol njengesixazululo sokukhipha. Umkhiqizo omkhulu we-astaxanthin (90%) watholakala ekusetshenzisweni kwe-ultrasound-eyasizwa ekusetshenzisweni kokusetshenziswa kwe-3 M lactic acid, isikhathi sokuphazanyiswa kweminithi engu-15. Amaprosesa anamandla e-ultrasonic anjalo I-UIP4000hdT (4kW, bheka pic. Ngakwesobunxele) ngokuhambisana nokugeleza okucindezelayo-ngokusebenzisa i-reactor kunika amandla ekwakheni kwe-cavitation kakhulu. Amandla okugcoba ama-cavitational aphazamise izindonga zesilonda semvubelo futhi akhuthaze ukudluliswa okukhulu phakathi kwe-cell ingaphakathi kanye ne-solvent.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Astaxanthin Extraction
Izixazululo ezihlaza (isib. Amanzi / ethanol)
Ultrasonic Astaxanthin Extraction – ku-Batch noma Continuous Flow Mode
I-Astaxanthin iyinhlanganisela ye-lipophilic futhi ingasungulwa ema-solvents (isib. 48.0% i-ethanol e-ethyl acetate) namafutha (isib. I-soy bean oil).
Isigaba: Izinqubo ze-ultrasonic yesikhumba zingasebenza njengezinqubo ezilula ze-batch noma njengokwelapha okunezinhlawulo, lapho isikhulumi senziwa khona njalo ngokudlulela nge-ultrasonic flow-through reactor.
Ukucubungula ama-batch kuyinkambinkimbi elula, lapho isizinda senziwa khona ngenkatho. I-Hielscher Ultrasonics inikeza amaprosesa e-ultrasonic amatshangi amancane kuya kwamakhulu, oku-1L kuya ku-120L.
Ukucubungula ama-batches we-5 kuya ku-10L, sincoma UP400St nge-sonotrode S24d22L2D (bheka isithombe. ngakwesokunxele).
Ukucubungula ama-batches we-approx. 120L, sincoma I-UIP2000hdT nge-sonotrode RS4d40L4 (bona pic. phezulu ngakwesokudla).
I-Flow-through: Ukuze kube nemikhakha emikhudlwana kanye nesisindo esikhulu sokuhweba okugcwele, ukusakazwa kwamanzi okuqhubekayo kudliwa nge-reactor ye-ultrasonic, lapho i-slurry e-solvent / botanical i-sonicated kakhulu.
Ngomsindo we-approx. 8L / iminithi, sincoma I-UIP4000hdT nge-sonotrode RS4d40L3 kanye no-flow1 cell-cell FC130L4-3G0
I-UIP2000hdT (2kW) ngesilinganiso esikhulu se-batch extraction
Ukusebenza okuphezulu kwe-Ultrasonicators for Extraction
Iphothifoliyo yomkhiqizo omkhulu kaHielscher isukela kuma-lab ultrasonicators amancane, anamandla amakhulu kumabhentshi amakhulu kanye nezinhlelo ezigcwele zezimboni, eziletha ukuphakama okukhulu kwe-ultrasound ukuze kusetshenziswe kahle futhi kuhlukaniswe izingxenye eziphilayo (isib. quercetin, i-caffeine, i-curcumin, Terpenes njll). Wonke amadivayisi we-ultrasonic avela 200W kuya 16,000W kufaka isibonisi ezinemibala yokulawula idijithali, ikhadi elihlanganisiwe le-SD lokuqopha okuzenzakalelayo kwedatha, ukulawula okukude kwesiphequluli kanye nezinye izici eziningi zomsebenzisi. I-sonotrodes namaseli okugeleza (izingxenye, ezithintana nephakathi) zingenziwa nge-autoclaved futhi kulula ukuzihlanza. Wonke ama-ultrasonicators ethu akhiwe ngomsebenzi we-24/7, adinga ukugcinwa okuphansi futhi kulula futhi ephephile ukusebenza.
Umbukiso wombala wedijithali uvumela ukulawulwa komsebenzisi-friendly of the imishini ultrasonic. Amasistimu ethu akwazi ukuletha kusuka phansi kuya kuma-amplitudes aphakeme kakhulu. Ukukhishwa kwamakhemikhali e-astaxanthin, sinikeza i-sonotrodes ekhethekile ye-ultrasonic (eyaziwa ngokuthi i-ultrasonic probes noma izimpondo) ezilungiselelwe ukuhlukaniswa okubucayi kwezinto eziphezulu ezisebenzayo. I-sonotrode ekhethekile ye-Hielscher yama-amplitudes aphezulu kuhlanganiswa namaseli okugeleza okucindezelayo akhiqiza amandla amakhulu okugcoba ukugcoba, okuphazamisa ngisho namagundane omvubelo kakhulu. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza komsebenzi we-24/7 emsebenzini obuthakathaka nasezindaweni ezinzima.
Ukulawulwa okuqondile kwemigomo yezinqubo ze-ultrasonic kuqinisekisa ukukhiqizwa kabusha nokucubungula ukulinganisa. Izinhlelo ze-ultrasound ultrasonic zezimboni ze-Hielscher zenzelwe ukukhiqizwa okuphezulu kokukhiqizwa kwekhwalithi ephezulu, ngesikhathi esifanayo ukunciphisa abasebenzi, izindleko namandla.
I-Gogate et al. (2015): Ukusizwa kwe-Ultrasound Ukuqiniswa Kokukhishwa Kwe-Astaxanthin kusuka ku-Phaffia rhodozyma. I-Indian Chemical Engineer 2015, 57: 3-4, 240-255.
Zou et al. (2013): Indlela Yokuphendula Impendulo Ye-Ultrasound-Assisted Extraction ye-Astaxanthin esuka eHaematococcus pluvialis. Izidakamizwa zasolwandle 2013, 11, 1644-1655.
Isizinda se-Ultrasonic noma i-sono-isizinda sisekelwe esimisweni se-acoustic cavitation.
Uma ama-ultrasound ama-intensity asetshenziswa kuma-liquid systems, i-acoustic cavitation iyenzeka, okuyinto yenzalo yesizukulwane, ukukhula nokugcina ukuqhuma kwamabhulebhu avumayo (bheka isithombe ngezansi). Phakathi nokusabalalisa kwamagagasi e-ultrasound, ama-bubbles avumayo aqhuma futhi akhule aze afinyelele iphuzu lapho bengenakukwazi ukuthola amandla amaningi. Esiqongweni se-bubble ukukhula bawela ngokuhlukumezayo, okubangela ukushisa kwamakhemikhali, amakhemikhali, kanye namakhemikhali. Imiphumela yemishini ihlanganisa ukucindezelwa okukhulu kuze kufike ku-1000atm, turbulences, kanye ne-shear force force. Lezo zinsizakalo ziphazamisa izindonga zeseli futhi zithuthukise ukudluliswa okukhulu phakathi kwe-cell yangaphakathi kanye ne-solvent ekhishwa ama-bioactive compounds ku-liquid ezungezile (ie solvent).
Isizinda se-ultrasonic samakhemikhali avela ku-botanicals nesisindo se-cell sesiphenywe kahle. Ukusetshenziswa kwamagagasi amakhulu kakhulu e-ultrasonic kukhuthaza izinqubo zesikhulumi kakhulu. Ngaphandle kwenqubo yokuqinisa – okuholela ekuvuneni okuphezulu nesikhathi esifushane sokukhishwa – Ukulimala okushisa nokulahlekelwa kwamazinga okushisa okushisa okuvinjelwayo kuvinjelwe ngoba i-sonication ayikhambi kokwelapha. Ngaphezu kwalokho, isizinda se-ultrasonic sinemali ephansi yokutshalwa kwezimali kanye nokusebenza, kunciphisa ukusetshenziswa kwe-solvents kanye / noma kuvumela ukusebenzisa ama-solvents ama-greener, okwenza kube nezindlela zokonga nezomvelo-friendly friendly. Ukukhipha izindlela ezijwayelekile zokukhipha, isisetshenziswa se-ultrasonically-assisted (UAE) samukelwe embonini yokudla ukuze kuveliswe izidakamizwa eziphilayo kanye nezindleko zokonga.
I-Astaxanthin ihlukaniswa nombala obomvu ojulile. I-pigment e-fat-soluble etholakala ku-algae (isib. I-Haematococcus pluvialis, i-Chlorella zofingiensis, i-Chlorococcum), imvubelo (isb. I-Phaffia rhodozyma), i-salmon, i-trout, i-krill, imfucumfucu kanye ne-crayfish. I-Astaxanthin ibhekwa njenge-super-antioxidant kusukela i-antioxidative potency yayo ishumi elinamatshumi amabili kunamandla kunamanye ama-carotenoids amaningi, njenge-beta-carotene, i-lutein, ne-zeaxanthin, futhi izikhathi eziyikhulu kune-alpha-tocopherol (i-vitamin E) .
I-Astaxanthin (3,3'-dihydroxy-β, β'-carotene-4,4'-dione) i-keto-carotenoid futhi iyingxenye enkulu yamakhemikhali abizwa ngokuthi i-terpenes (njenge-tetraterpenoid), eyakhiwa ama-precursors ama-carbon kabili, i-isopentenyl diphosphate, ne-dimethylallyl diphosphate. I-Astaxanthin ihlukaniswa njengezinhlobo ze-carotenoid ezihlanganiswa nezingxenye zomoya-mpilo, okuyi-hydroxyl (-OH) noma i-ketone (C = O), njenge-zeaxanthin ne-canthaxanthin. I-Astaxanthin iyi-metabolite ye-zeaxanthin kanye / noma i-canthaxanthin, equkethe amaqembu asebenzayo ama-hydroxyl kanye ne-ketone. Njengama-carotenoids amaningi, i-astaxanthin iyi-pigment-soluble pigment futhi ihlukaniswa nombala wayo obomvu. Ama-carotenoids afaka i-astaxanthin eyaziwa kakhulu ngamandla awo wokulwa ne-antioxidative.
I-Astaxanthin iyi-pigment ebomvu futhi ngokwemvelo ivela emanzini emvula yamanzi (i-Haematococcus pluvialis) nemvubelo ebizwa nge-Xanthophyllomyces dendrorhous (eyaziwa nangokuthi i-Phaffia rhodozyma). I-algae ihlushwa ngokucindezeleka ngeyodwa noma inhlanganisela yezimo ezibangelwa ukuntuleka kwezakhi, ukwanda kosawoti okwandisiwe, nokushisa kwelanga okweqile ukwenza i-Astaxanthin. Izinhlobo ezidla lezo zici ezincibilikisiwe zamanzi ahlanzekile, njenge-salmon, i-trout ebomvu, i-red bream, i-flamingo, ama-crustaceans (isib. Imfucumfucu, i-krill, i-crab, i-lobster, i-crayfish), ibonisa ukujula kwe-hues red-orange ekubukeni kwayo.
Njengengxenye yokwengeza, i-astaxanthin ihlinzekwa ngemiphumela yayo yokwelapha nokukhuthaza ukugula. I-Astaxanthin iyi-nutraceutical eyakhelwe kahle ukuze kuthuthukiswe isikhumba (isib. Ukunciphisa imibimbi, ukulimala ngokushisa kwelanga njll).
Ngaphezu kwalokho, i-astaxanthin ithola ukunakekelwa kokusetshenziswa kwayo ukuphatha isifo se-Alzheimer, isifo sika-Parkinson, i-carases-vascular deaseses, i-cholesterol ephezulu, izifo zesibindi, ukuguqulwa kwe-macular ubudala, nokuvimbela umdlavuza.